Fitaovana fingotra iraisam-pirenena sy fitaovana mandroso amin'ny sehatry ny fitsaboana
tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-30
Haharitra telo andro ny fampirantiana manomboka ny 10 hatramin'ny 12 Oktobra. Ny fanomanana alohan'ny fampirantiana: ny fitaovana fampiroboroboana ny orinasa, ny teny nalaina tamina vokatra mahazatra, ny santionany, ny kara-pandraharahana, ary ny lisitry ny mpanjifa izay ho tonga ao amin'ny booth, ...
Hiseho mandritra ny telo andro ny fampirantiana iraisam-pirenena iraisam-pirenena momba ny fitrandrahana laharana faha-20 any Shina manomboka amin'ny 16 ka hatramin'ny 18 septambra 2020. Taona manokana ny 2020 Amin'ny lohataonan'ireo taona lasa, handray anjara amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena sy anatiny isan-karazany ny orinasa mba hampiroborobo ...
Haseho mandritra ny telo andro ny fampirantiana iraisam-pirenena momba ny fitrandrahana vovoka sinoa faha-19 manomboka ny 18 ka hatramin'ny 20 septambra 2019. Nandritra ny fampirantiana dia namoaka bokikely miisa 100, kara-pandraharahana 30 manokana izahay ary nahazo karatra sy fitaovana ho an'ny mpanjifa 20. Su ...
Famokarana dingana famolavolana fingotra indostrialy
tamin'ny admin tamin'ny 2020-11-10
Ny dingana voalohany amin'ny fampifangaroana dia ny fifehezana ny atin'ny akora tsirairay sy ny mari-pana amin'ny lafaoro, mba hitoeran'ny henjana sy ny akora. Aorian'ny fangaro, satria mbola misy loto ny kôlôdô ary tsy mitovy fanamiana dia tsy maintsy sivanina. Ankoatra ny fiantohana ny ...
Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd.Ny orinasanay momba anay Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra fitaovana fingotra maoderina manambatra fikarohana sy famokarana siantifika. Niorina tamin'ny taona 1998, ny orinasa no fototra iorenan'ny famokarana spe ...
Fanatsarana ny fizotran'ny famokarana gazy nentim-paharazana
Ao amin'ny indostrian'ny vokatra vita amin'ny fingotra, ny roller rubber dia vokatra manokana. Manana fampiasa isan-karazany izy io, manana takiana teknika samihafa amin'ny fingotra, ary sarotra ny tontolo iainana fampiasana. Raha eo amin'ny lafiny fanodinana dia vokatra matevina izy io, ary ny fingotra dia tsy afaka manana pores, loto ary faharesena ...
Rollers fingotra indostrialy
tamin'ny admin tamin'ny 2020-08-08
Industrial Rubber Rollers Rubber rollers dia ampiasaina amin'ny tanjona maro samihafa ary hita amin'ny fizotry ny famokarana maro. Ny fampiasana fototra ho an'ny roller fingotra dia hita amin'ny fizotran'ny fanodinana lamba, sarimihetsika, ravina, taratasy ary vy mihorona. Ny roulant vita amin'ny fingotra dia ampiasaina amin'ny karazana con ...